अन्तर्वार्ता :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
अन्तर्वार्ता गरीव देशको धनी भनेर चिनिने मन छैन
गरिव देशको धनी ब्यक्ति भनेर चिनिन मलाई गौरव लाग्दैन, लाज लाग्छ । त्यस्तो दिन आओस्, जुन दिन नेपाल विकासको गतितिर लम्किदै छ है, नेपालले विकासको फड्को मार्दै छ है भन्ने होस । अनि त्योबेलामा...
मदन भण्डारी र मनोज भण्डारी एकै आमाका सन्तान भए पनि दुबेको यात्रा फरक रह्यो । मदन कट्टर कम्युनिष्ट बन्नुभयो भने दाजु चाँहि घरबार छाडेर सन्यासी हुनुभयो । तर, दुईवटैमा एउटा अनौठो समानता थियो, दुबैले...
अब सहमति र सम्झौता गर्ने ठाउँहरु सबै सकिएका छन् । त्यसैले चुनाब भयो भने हामी कसैलाई यो ठाउँ छाड्दैनौं, हामी आफैं चुनाबमा भाग लिन्छौं । अर्कालाई छाडेर नहुँदोरहेछ, तर, चुनावमा निर्वाचित सभासदमार्फत लिम्बुवानमा समानान्तर...
लामो समय नेपालमा बामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय कमानसिंह लामा दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ । अरु राजदूत कार्यक्षेत्रमा पुगेपछि विवादमा नमुछिए पनि लामालाई भने सिफारिस भएसँगै मानव बेचबिखन लगायतका गम्भीर आरोप लाग्यो । कार्यभार...
-देवीप्रकाश भट्टचन, अध्यक्ष नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसन
देवीप्रकाश भट्टचन, नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । रेमिट्यान्स बिजनेसमा नेपालमा मात्र हैन, अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत स्थापित ब्राण्ड प्रभु मनी ट्रान्सफरका अध्यक्षसमेत रहनुभएका भट्टचन व्यवसाय प्रर्वद्धनका लागि अधिकांश समय...
जनताले सबैको चरित्र देखे । मधेसका मुक्तिदाताहरुको चरित्र पनि हेरे, यो देशका गरीवका पैगम्बरहरुको पनि हेरे । यो देशलाई हामीले मिलाएर लान्छौ भन्ने एमालेको पनि हेरे । माओवादी, मधेसवादी, एमाले सबैको हेरे । आखिर...
सरकारमा नपुग्दासम्म कम्युनिष्ट पार्टीको नीति यस्तै देखिन्छ । सरकारमा पुगिसकेपछि उनीहरुलाई भारततिर लाग्यो भन्ने आरोप आउँछ । सरकारमा हुँदा पनि र नहँदा पनि एउटा कारगर नीति बनाउन नसकेको कुरा यसले स्पष्ट गर्छ । कसैको...
नेपालका नेताहरुको एउटा न एउटा थेगो पाइने गरेको छ । सुशील कोइरालाको 'उ गर्ने' शेरबहादुरको 'भन्देखिनलाई' रामचन्द्र पौडेलको 'चैने' र प्रचण्डको 'मने' जस्तै माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यको थेगो 'भन्नोस्' रहेको छ । समसामयिक राजनीतिक...
-पावना श्रेष्ठ, कन्ट्री म्यानेजर-नेपाल, इत्तिहाद एयरवेज
नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक निरन्तर ओरालो लागेसँगै विदेशी एयरलाइन्सले महत्वपूर्ण बजार हिस्सा लिएका छन । अहिले करिव ३० वटा बिदेशी एयरलाइन्सले नेपालमा उडान गरिरहेका छन । नेपालमा उडान गर्ने यी...
-सुजाता कोइराला, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
यस्तो लाग्छ, नेतृ सुजाता कोइराला यतिबेला कांग्रेसभित्र क्रान्तिकारी धारतर्फ उन्मुख बन्न थाल्नुभएको छ । पछिल्ला दिनमा कोइराला पार्टीको संस्थापन पक्षसँग वैचारिकरुपमै असहमत देखिन थाल्नुभएको छ । जतिबेला कांग्रेसले बाबुराम...
असार, साउन र भदौ वर्षा र हिलोमैलोको बेला भयो । असोजमा दशैं, कात्तिकमा तिहार । मंसिरमा धान थन्क्याउने बेला । पुस र माघ जाडो लाग्छ । तिहार सकिएपछि कात्तिकमा गर्दा ठीक हुन्छ चुनाव ।...
कानुनको सिरानी हालेर बलात्कार गरियो
अदालतले अन्याय गर्यो भने न्याय माग्ने कि नमाग्ने ? मलाई अन्याय भयो भन्ने कि नभन्ने ? अदालत भनेको त्रिकालदर्शी हो र ? के अदलातले अन्याय गर्दैन ? अपराधलाई सबैभन्दा बढी बैधानिकता कहाँबाट दिइन्छ ?...